Jacaylka xiriirka Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Wakhti ka dib, jacaylku wuu sii dari karaa
Labada qof ee wada-hawlgalayaasha ah ayaa dalbanaya jacayl
Waxyaabaha yaryar iyo hadiyooyin yaryar badan ayaa sameyn kara
Jacaylku mar kale ma iman karaa?
Cuntada jaceylka ah
Ha ogolaan in jacaylku mar kale hurdo maro
Gaar ahaan marka xiriirku uu socdo muddo dhowr sano ah, waxaa mararka qaarkood dhici karta in jacaylka wada-shaqayntu uu yareeyo wax yar. Tani waa caadi, lakiin lamaanayaashu waxay wax ka qaban karaan, sababtoo ah waxaa muhiim ah in jacaylka la ilaaliyo xiriirka. Si ay mashruucan u guulaystaan, waxaa muhiim ah in labada lammaane ay muujiyaan ballanqaad iyo rabitaan si ay ugu soo celiyaan sheekada hore.
Si loo soo nooleeyo jacaylka xiriirka
Dhammaanba, xidhiidhka markasta wuxuu ku lug leeyahay laba qof. Hadda, dabcan, su'aashu waxa ay u muuqataa sida jacaylku u noqon karo qayb nolol maalmeedka. Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo nolol jaceyl wadajir ah loo wada dhan yahay.
Lamaane yar oo leh casho jaceyl ah
Badanaa, maahan wax badan oo lagama maarmaan ah in lagu daro jacaylka shuraako, sababtoo ah xitaa xitaa dhaqdhaqaaq yar ayaa caawiya.
Jacaylka qaarkood waa in had iyo jeer la joogaa, maxaa yeelay lamaanuhu waxay ka faa'iideysan karaan jawi jaceyl ah. Sababtan awgeed, waxaa macquul ah in la hubiyo in jacaylku uu ku soo laabto xiriirka oo uu keeno wadashaqeyn dhow. Cunto wadajir ah ama wadaad yar oo la siinayo lammaanuhu waxay ka caawisaa in ay jacaylku noolaadaan.
Xitaa waxqabadka firaaqada ah ee la wadaago wuxuu xaqiijin karaa in u dhowaanshaha asxaabta loo arko inay tahay mid wanaagsan. Mararka qaarkood way adkaan kartaa in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqa jacaylka wakhti dheer, laakiin dadaalka badanaa waa mid wanaagsan, maaddaama xiriirka jacaylku uu ku siin karo nolol farxad leh labada lammaane. Laakiin sababta jawiga jaceylku dhab ahaantii u dhaco mararka qaarkood?
Haddii aan loo baahnayn, waxaa suurtagal ah in jacaylka jaceylka ah ee xiriirka uu waqti gaaban ka baxo. Bilowga xiriirka ugu badan, xiisaha uu la leeyahay lamaanuhu waa mid aad u weyn, oo markaa, dadaal badan ayaa loo sameeyaa si loo helo shuruudaha oo lagu farxo.
Laakiin marxaladaha qaarkood ee xiriirka ayaa imaanaya waqtiga nolol maalmeedka. Jacaylka lammaanaha waxaa mararka qaar loo qaataa si loo helo, dadaalka hore ee muhiimka u ahaa xiriirka ayaa ugu dambeyntii noqda wax yar. Iyadoo aan laheyn dhaqdhaqaaqa jaceylka ah, waa wax caadi ah in nolol maalmeedka ay sii kordheyso helitaanka gacanta sare iyo jacaylka xiriirka ayaa sii yaraanaya.
Xataa wadashaqeyn cusub oo cusub, waxay dhici kartaa in jacaylku si deg deg ah hoos u dhaco.
Dabcan, waxay ka dhigaysaa dareen macquul ah si looga hortago tan. Waxaa jira dhowr siyaabood oo looga hortagi karo xiriirka ka lumitaanka jacaylka. Jacaylku waa inuu had iyo jeer ku sii jiraa mawduuc taagan oo xiriir la leh. Si kastaba ha noqotee, ma aha keliya mid ka mid ah shurakadu waxay bixin karaan dhaqdhaqaaqa jaceylka ah. Halkii, waa inay noqotaa mid xiisaha leh labada qof ee wada-hawlgalayaasha ah si ay u daryeesho jacaylka.
Jacaylka wada shaqeyntu maaha keligiis. Labada qof ee wada-hawlgalayaashu waxay ku dhex jiraan xiriirka marka ay timaado dareenka jacaylka. Marka labada lammaane ay ku dadaalaan inay samaystaan ​​lammaanaha kale, way sahlan tahay in la abuuro nolol maalmeed jacayl ah oo ku siin kara ku qanacsanaanta xiriirka.
Iyada oo loo marayo isticmaalka labada shuraako, jacaylka ayaa loo samayn karaa mid aad u kala duwan, sababtoo ah dabcan, qof kastaa wuxuu leeyahay fikrad ka duwan ficil jaceyl ah. Qof kastaa wuxuu dareemaa waxyaabo kale oo ka badan jacaylka waana taas sababta ay lamaanayaashu uga fekeraan waxa uu lammaanuhu jeclaan lahaa. Xidhiidhka soconayay wakhti wakhti ah, lammaanuhu wuxuu caadi ahaan si fiican u yaqaan inuu si fiican u yaqaan oo uu ogaado waxyaabaha uu jecel yahay.
Tani waxay fududeyneysaa in la diyaariyo wax u diyaargarawga lamaanaha oo kordhiya fursadaha ah in dadaalka loo arko inuu yahay jacayl raaxo leh. Haddii labada qof ee wada-hawlgalayaasha ahi u shaqeeyaan xiriirka ayna sameeyaan si ay u ilaaliyaan ama u soo nooleeyaan jacaylka, fursada ah in la gaaro hadafkani waa ka weyn yahay haddii kaliya hal shuraako ay raacdo ujeeddadaas. Hore oo leh dhaqdhaqaaqyo yaryar oo bilowga ah ayaa la samayn karaa.
Xitaa ficilka yaryar wuxuu ku siin karaa niyad jaceyl ah xiriirka. Tusaale ahaan, ma qaadato dadaal badan si aad ugu iibsato bouquet of ubax ka dib shaqada iyo u keeno lamaanahaaga. Dad badan ayaa ku faraxsan marka ay helayaan ubax hadiyad ahaan.
Sifooyinka kale ee aan la filaynin ayaa sidoo kale ka farxin kara lammaanaha. Dhammaan wixii ka dambeeya, hadiyado hadiyado ah ma aha oo keliya maalmo sida Christmas, Maalinta Jacaylka ama dhalashada. Hadiyad, oo si lama filaan ah loo sameeyo, badanaa waxay bixisaa farxad aad u badan, sida hadiyado, oo mid ka mid ah filaya inuu yahay lammaanaha fasaxyada dadweynaha haa iyo ku dhawaad ​​kiis ahaan.
Sidaa daraadeed, hadiyado noocan oo kale ahi way ku farxi karaan. Maaha arrin qaali ah ama qaali ah xaadirka. Waxay ku xisaabtamaysaa dhaqdhaqaaqa, sababtoo ah waxay cadeyneysaa in dareenka xooggan ee lammaanaha. Si kastaba ha ahaatee, hadiyadaha la yaabka leh ee noocan ah waa inaan la samayn maalin kasta, haddii kale waxay si dhakhso ah u noqon doonaan arrin dabcan. Hadiyadaha yar yar waa inay ilaaliyaan qaas ahaantooda si ay u sii wadaan inay gacan ka geystaan ​​ilaalinta jacaylka xiriirka.
Xitaa ereyada jacaylka ah, ayaa lagu sheegaa ama lagu soo koobay warqad jaceyl ah, waa hab fiican oo lagu muujiyo lammaanaha, dareenka la dareemo. Waxyaabaha yaryar iyo hadiyado yaryar ayaa kaa caawin kara in jacaylku noolaado ama soo nooleeyo. Laakiin muxuu jacaylku u yahay mid muhiim u ah iskaashiga?
Jacaylka xidhiidhku waa muhiim
Sheeko jaceyl ah ama dhaqdhaqaaq jacayl leh ayaa muujinaya qof daryeesho lammaanihiisa. Badanaa, dadku waxay illoobaan inay qiimeeyaan waxa ay horeba u hayaan. Xiriir wanaagsan waa in had iyo jeer la joogteeyaa si jacaylka lamaanaha looma lumo.
Xidhiidhka jacaylku wuxuu siin karaa labada qof ee wada-hawlgalayaal badan oo madadaalo ah iyo wakhti fiican
Sidaas awgeed waa wax fiican haddii labada qof ee wada-hawlgalayaashu ay ku dadaalaan inay ku sii wadaan niyadda jacaylka ee wada-shaqeynta. Jacaylku maaha mid iska cad. Kuwaas waxaa ka mid ah hal-abuurnimada iyo hirgelinta, sababtoo ah dabeecadda jacaylka waa inay ahaataa waxoogaa kala duwan, si looga hortago in ay noqdaan kuwo isku mid ah. Haddii jacaylka, inkastoo dadaalka la-hawlgalayaasha, laakiin mararka qaar ka baxo xiriirka, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la hubiyo in ay soo noqoto.
Xitaa haddii dabeecadda jaceylku ay ka baxdo shuraako, macnaheedu maaha in gebi ahaanba la waayay iyo weligiisba. Halkii, waxaa jira fursad lagu hubiyo in jacaylku uu ku soo laabto xiriirka iyo laga yaabo in xitaa xoogaa ka xoog badan sidii hore.
Xilliyada raaxada ee guriga
Xaaladaha qaarkood marwalba way adagtahay in dib loo dhigo jacaylka, laakiin xaaladaha badankood waxay u qalantaa dadaalka, sababtoo ah wadashaqeyn ka buuxda jacaylku waa wax aad u fiican labada lammaane. Laakiin yaa runtii ka jaceyl badan? Dumarka ama raga?
Dumarka iyo ragga ma si isku mid ah jacaylku?
Dhab ahaantii suurtagal maaha in la sheego in haweenku iyo ragguba yihiin jacayl badan, sababtoo ah qof kastaa wuxuu fahmaa wax kale oo ah jimicsiga. Dumarka iyo ragga labadaba waxay yeelan karaan dareen ah jacayl. Cilaaqaadku wuu ka faa'iideysan karaa haddii labada qof ee wada-hawlgalayaasha ah ay ku siiyaan jacayl yar oo wada-shaqeyn ah taasina waxay kor u qaadeysaa wada-noolaanshaha farxad leh. Sidaa darted, haweenka iyo ragguba waxay noqon karaan kuwo raaxo leh. Laakiin sidee ayey suurtagal u tahay in lammaanuhu galo fiidkii jaceylka ah iyo meesha ay ku habboon tahay?
Nidaam caadi ah, oo laga dhigi karo mid aad u jilicsan, waa casho makhaayad. Marka la cuno makhaayad, lamaanuhu uma baahna inay diyaariyaan casho u gaar ah, halkii ay diiradda saari lahaayeen wadahadalka.
Cuntada makhaayadda qurxinta leh waxaa loo tixgeliyaa sida jacaylka jimicsiga wakhtiga firaaqada ee lammaanaha. Habeen wanaagsan, lammaanuhu waxay fursad u leeyihiin inay mar kale isa soo dhaweeyaan si ay u xoojiyaan dareenka jacaylka. Ma aha oo kaliya in casho lala wadaago makhaayadda waxay kordhin kartaa jacaylka xiriirka. Saameyntu waxay sidoo kale ku haboon tahay inay gaaraan hadafkan.
Muxuu qofku u malaynayaa in uu ku riyoonayo raaxo jaceyl ah?
Fikrad jaceyl ah ayaa u muuqata mid aad u kala duwan. Tusaale ahaan, waxaa suurtagal ah in la qorsheeyo fiidnimada jaceylka naftaada ka dibna u gali ficilka si aad u siiso farxadda lamaanaha sidan. Xitaa fiidkii gurigaaga ayaa loo isticmaali karaa si loo abuuro niyad jaceyl ah.
Ku raaxee jacaylka gurigaaga
Miyuus yar, heeso raaxo leh, filim jacayl ah iyo shumac jaceyl ah. Xitaa haddii ay jiraan waxyaabo yaryar oo laga caawiyo, waxaa jira fursad ay ku qaataan habeen jaceyl ah, taas oo labaduba ay ku raaxeysan karaan. Xitaa lama huraan inaad ka baxdo gurigaaga sida ugu dhakhsaha badan diyaarinta habeenkii.
Waxaad dareentaa daqiiqado raaxo leh lammaanahaaga
Fiidkii oo ku beegan fadhiga fadhiga ayaa noqon kara mid jaceyl ah. Dabcan, waxaa jira siyaabo kale oo kaa caawin kara inaad ku sii wadato xishoodka wada shaqeynta. Labada qof ee jecel inay waqtigooda firfircooni si firfircoon u qaataan waxay qabsan karaan fursadda ayna raadiyaan hiwaayad, oo labadaba ay wada-shaqeyn karaan.
Si loola shaqeeyo lammaanaha
Dabcan, waxaa lagugula talinayaa inaad had iyo jeer isku dartid jacaylka nolol maalmeedka ee xiriirka. Tusaale ahaan, lammaanayaashu waxay la xiriiri karaan si ay u muujiyaan in ay xiiseynayaan hiwaayadaha lammaanaha. Iyada oo la wadaago danaha, lammaanuhu waxay leeyihiin fursad ay ku qaataan wakhti xor ah.
Intaas waxaa dheer, waxaa suurtagal ah in la raadsado hiwaayad caadi ah oo labada qof ee wada-hawlgalayaashu ay leeyihiin farxad, sababtoo ah, ka dib, waxaa kale oo jira hawlo firfircoon oo loo tixgelinayo jacayl. Tusaale ahaan, lamaanayaashu waxay qaadan karaan koorso qoob-ka-cayaar ah waxayna hagaajiyaan xirfadahooda qoob-ka-ciyaarka ah, ka dibna si wacan u dhigaan qoob-ka-cayaaraha cusub ee qoob ka ciyaarka.
Hobbyed la wadaago ayaa kaa caawin kara kordhinta jacaylka ee xiriirka. Sidan oo kale, waxa kale oo suurtagal ah in la tuso lamaanaha in uu jiro xiiso weyn isaga. Marka ay u suurta gashay in ay jacaylka dib ugu soo celiso xiriirka, labadaba waa in ay hubiyaan inaysan mar dambe hurudin.
Lammaane kasta oo waligiis la kulmay jacaylka jacaylka ee xiriirka ay la leeyihiin waxay ogtahay in jacaylka uu dib ugu soo laabanayo uu noqon karo mid aad u adag. Sababtan awgeed, waxay macno u tahay in la hubiyo in dabeecada jacaylku uusan mar kale huruddo. Naxariistu waa arrin aad u muhiim ah xiriir kasta. Taasina waa sababta aysan uga maqnaanin shuraako kasta.
Xitaa dhaqdhaqaaqa jacaylka yar ayaa ka qayb qaadan kara jacaylka xiriirka aan la dayacin. Ku dhaha qaar ka mid ah asxaabta wanaagsan ama ereyada nafta leh ma noqon doonto mid adag oo lamaanahuna si dhab ah u qadarin doono. Booqashada wadajirka ah si makhaayad jacaylka ama fiidkii a raaxo leh guriga waa siyaabo wanaagsan in waqti qaar ka mid ah ku qaataan la lamaanahaaga iyo in ay wada hadalo, maxaa yeelay, dabcan, wada hadalka oo faahfaahsan waa muhiim in xiriir. Waxaa mar hore suurtagal ah dadaal yar oo looga hortagayo jacaylka oo aan la seexin wada-shaqeyn.
Liiska Madaxweynayaasha Mareykanka / USA
Qoraalka Fairytale Brothers Grimm - Pussy Boots
Socodka qoyska fasaxa